Ny Fiarahana ho an’ny fifandraisana matotra
Ny nofy tovovavy rehetra mba hitsena malala lehilahy sy ny mamorona ny fianakaviana sambatra. Indraindray dia sarotra ny mahita ny lehilahy ho an’ny lehibe sy ny fifandraisana: ny ankehitriny haingana ny fiainana, saina asa avelao kely kokoa ny fotoana ho an’ny tenany, mba hahita ny faharoa dia ny fahazoana ny ampahany, ary amin’ny fifandraisana amin’ny Ankapobeny. Izany no antony maro ny ankizivavy manapa-kevitra ny hampiasa ny asa ny Mampiaraka toerana, ary miezaka ny hivory hiaraka vahiny iray ho an’ny fifandraisana matotra.
Indraindray izany dia ny faniriana ny ho afa-mandositra avy amin’ny fiainana andavanandro: mamirapiratra endriky ny vahiny ny olona, ny hafa firenena, ny mafana ny toetrandro, hafa fomba amam-panao sy kolontsaina toa manintona, rehefa avy ny orana tany ivelany ary eny an-dalambe dia mampalahelo, tena voarakitra fikambanana. Matetika ny olona vahiny dia misokatra kokoa ho zava-dehibe ny anjara asany amin’ny maha-vady sy ray, sy ny fanohanana ny fianakaviana dia vonona ny hanohana ny vadiny, ary ny ankizy sy ny tsiky mihoatra ny Fifandraisana iraisam-pirenena Mampiaraka toerana sy mianatra bebe kokoa momba ny lehilahy vahiny sy mipetraka any amin’ny firenena hafa, ianao afaka ny ho tonga amin’ny fanapahan-kevitra ny hanambady vahiny sy ny hifindra any amin’ny firenena hafa. Toy izany fanapahan-kevitra tokony ho raisina amim-pitandremana, fa tsy manome ny mihelina faniriana lalina mba handao ny zava-drehetra, ary hiala. Ary raha ny fanapahan-kevitra atao, ary ny lehibe ny toe-tsaina mba tsy handrava visa fepetra sy ny lavitra, fotsiny ho azo antoka ny sonia ho amin’ny Mampiaraka toerana miaraka amin’ny vahiny ho an’ny fifandraisana matotra. Nahoana ireo vahiny mitady tovovavy ho fanambadiana avy any Brezila, Okraina sy i Belarosia. Sampa tsy ampy amin’ny teny ankizivavy no hita vatana ny hatsaran-tarehy voajanahary, izay hita amin’ny sary ny fitiavana ny vadiny sy ny fiahiana ny reny.
Ireo toetra tena ankasitrahan’ny lehilahy avy any Eoropa
Inona avy ireo sakafo ho an’ny fahombiazana amin’ny Mampiaraka toerana miaraka amin’ny vahiny ho an’ny fifandraisana matotra. Izany dia ilaina mba lazao bebe kokoa momba ny tenanao ao amin’ny fanontaniana: momba ny tombotsoa, ny fomba Fijery eo amin’ny fiainana ary miezaka mba hamaritana ny olona te-hihaona. Ny mahita sary tsara tarehy tsara toetra, fa ny fomba tsara indrindra dia hanolotra Ny bika aman’endriny. Toy ny ao amin’ny tena fiainana, ny fitsipika»hihaona amin’ny fitafiana». Sary tokony ho lehilahy tsara ny fahatsapana izany, ka te-hianatra bebe kokoa momba ny loka. Ahoana no mifidy ny sary nandritra ny Mampiaraka toerana miaraka amin’ny vahiny, no mitantara ny zava-nisy ity.
Ho marim-potoana, ary haingana no mamaly ny mailaka
Rehefa avy nahazo valiny ao anatin’ny roa andro, ny lehilahy dia mety ho very tombontsoa amin’ny fivoriana anao.
Aza matahotra manoratra ny lehilahy voalohany, lazao aminay momba ny tenanao, liana amin’ny fiainana ny olona, mba hangataka taminy ny fanontaniana. Lehilahy vahiny dia azo antoka fa ny zazavavy avy any Eoropa Atsinanana, manana fahatokian-tena izay mamela azy raha ny lehilahy no tiany, aza misalasala mba handray ny fandraisana an-tanana ny traikefa eo amin’ny tenany. Ny ekipa ny Fiarahana maniry Anao hihaona mendrika ny lehilahy sy ny mamorona mahery sy ny fianakaviana sambatra. Mba hahazoana mahafantatra tsara ny olona avy any Alemaina Mampiaraka maimaim-Poana ho an’ny vehivavy toerana Fiarahana iraisam-pirenena Mampiaraka toerana
← Lehilahy avy amin'ny USA Mampiaraka ao ETAZONIA